Byare January 21, 2019
(Europe) 21 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Weeraryahanka 30-jirka ah ee West Ham Andy Carroll ayaa u soo ifbaxay sida tartame lama filaan ah si uu u buuxiyo Weerarka Tottenham ee qaba dhibaatooyinka dhaawac. (Sun)
Eden Hazard kuma biiri doono Real Madrid bishan, laakiin 28-jirka wuxuu doonaya inuu diido dalabyada kale oo dhan isla markaana uu u soo dhaqaaqo camaaliqada reer Spain dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Marca)
Chelsea ayaa la filayaa inay dhammeystirto heshiiska amaahda ay kula soo saxiixaneyso weeraryahanka Juventus Gonzalo Higuain, 31-jir, halka daafaca Blues Emerson Palmieri, 24-jir uu dhanka kale ugu wareegi karo adduun dhan 15-milyan oo bound. (Star)
Higuain ayaa lagu wadaa inuu yimaado London Talaadada si uu u dhammeystiro heshiiska uu uga soo tagayo Juventus uguna soo biirayo Chelsea.(Express)
Tababaraha AC Milan Gennaro Gattuso kaa oo filayay inuu amaah ku sii heysan doono Higuain xill ciyaareedka ayaa sheegay inuu aqbalay go’aanka uu kooxda kaga tagayo laacibka reer Argentina. (Marca)
Weeraryahanka reer Colombia James Rodriguez, 27-jir ayaa lagu wadaa inuu diido fursada uu ugu dhaqaaqayo Arsenal, wuxuuna amaah ku joogi doonaa Bayern Munich ugu yaraan inta ka harsan kal ciyaareedkan. (ESPN)
Colombia international forward James Rodriguez, 27, is set to spurn the chance of a move to Arsenal and will stay on loan at Bayern Munich until the end of the season “at least.” (ESPN)
Chelsea ayaa dalab soo daahay ka gudbisay da’yarka qadka dhexe Barcelona Ilaix Moriba, 16-jir kaa oo sidoo kale laga doonayo dhanka Manchester City. (Sport)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa qishay in laga yaabo inuusan sameyn wax saxiixyo ah bishan iyadoo ay jirto dhibaato dhaawacyo oo ka heysata daafaca. (Liverpool Echo)
Macalinka Monaco Thierry Henry ayaa kula tartami kara kooxdiisii hore ee Arsenal Xiddiga garabka kaga ciyaara Atletico Madrid Gelson Martins, 23-jir. (O Jogo)
Daafaca FC Porto Eder Militao, kaa oo lala xiriirinayay Manchester United kama soo tagi doono dalka Portugal bishan, wakiilka 21-jirka ayaana soo jeediyay in laga yaabo inuu xagaaga u dhaqaaqo horyaalka Spain. (Manchester Evening News)
Caawiyihii hore ee Jurgen Klopp Zeljko Buvac ayaa si Rasmi ah uga tagay Liverpool kaddib markii la xaliyay faah faahinta qandaraaskiisa. (Liverpool Echo).